Somaliland: Xukuumadda Oo Lagu Eedeeyay Inay Bixin Waydey DEYN Ku Dhow $ 30 Kun, Oo Loo Haysto Wasiiru-Dawlaha Nabadaynta Gobollada Bariga - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xukuumadda Oo Lagu Eedeeyay Inay Bixin Waydey DEYN Ku Dhow $...
Muwaadin Ganacsade ah ayaa Xukuumadda Somaliland ku eedeeyay inay Wasiiru-Dawlaha Nabadaynta Gobollada bariga ka bixin wayday Kirada Gaadhi uu watay Muddo 7 Bilood ah.
Ganacsadahan oo lagu Magacaabo Cali Diiriye Jaamac, ayaa sheegay in Wasiiru-Dawlaha Nabadaynta Gobollada bariga Somaliland Mr. Cabdirashiid Gargaar uu ka kireystay Gaadhi Laan-guruusal ah isla-markaana uu watay muddo 7 bilood ah, balse uu ku soo celiyey Gaadhigii isagoon iska bixin Lacagtii kirada oo ku dhow Soddon kun oo Dollar, ka dib markii Xukuumadda oo uu doonayey inay Lacagtaa ka bixisaa ka gaabsatay, isaguna waayay Lacag uu kiradaa Gaadhiga iskaga bixiyo.
Ganacsade Cali Diiriye Jaamac oo Shalay Saxaafadda kula hadlay Magaalada Hargeysa, ayaa isagoo Arrimahaa ka hadlaya wuxuu yidhi “Waxaan ahay Cali Diiriye Jaamac oo Wasiiru-Dawlaha Nabadaynta Gobollada barigu Cabdirashiid Gargaar uu muddo 7 bilood ah Kiro ahaan uga watay Gaadhi (Laan-guruusal ah). Wasiirka waxaanu heshiis ku galnay inuu muddo 45 Cisho ah Lacagta ku soo bixinayo, markii uu muddadii Lacagta ku soo bixin waayey, Muddadiina dhaaftay waxaan Wasiiru-Dawlaha u diray Ergo, Ergadii waxba way ka keeni waayeen, ka dib waxaan Go’aansaday inaan Gaadhiga ka dhigo (Wasiiru-Dawlaha), kiradii aan xaqa u lahaana la I siiyo, maaddaama oo gaadhigayga la watay muddo 7 bilood ah, laakiin may dhicin inaan Helo Kiradii aan Xaqa u lahaa, Waayo? Gaadhiga waxa la iga siiyey Dhowr iyo Soddon kun, Kiradii waxay Gaadhay Soddon kun ku dhawaad.”
Cali Diiriye waxa kale oo uu sheegay “Wasiiru-Dawlaha oo isku hallaynayey in Dawladdu ka bixiso Lacagtana way ka gaabsatay, markaas ayuu Wasiiru-Dawlihii igu yidhi Gaadhigii oo Qalalan-baan kuu hayaa oo Shilin ma hayo, markaa halkaa Dulmi baa ka jira, Dulmigaana waxaan dusha ka saarayaa oo aan ku eedaynayaa Dawladda Madaxweyne Axmed-Siilaanyo, haddii arrintaydaa wax laga qaban-waayana Maxkamadda ayaan la tiigsanayaa..”ayuu yidhi.
Wasiiru-Dawlaha loo haysto Kirada Gaadhiga la sheegay inuu 7-da bilood watay, ayaan isagu dhankiisa ka hadal Arrintan, Wargeyska HIMILO oo isku dayey inuu xidhiidh la sameeyana una suurto-gelin inuu helo.